(Europe) 01 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Inter Milan ayaa eeganeysa daafaca garabka kaga ciyaara Manchester United Ashley Young, 33-jir iyagoo rajeynaya inay si dhaqsi leh beeca xorta ah ugu soo qaataan suuqa xagaaga marka uu dhoco qandaraaskiisa. (Mirror)
Tababare Unai Emery ayaa sheegay in Arsenal aysan sameyn wada hadalo ku aadan saxiixa daafaca dhexe ee Chelsea Gary Cahill, 33-jir bishan Janaayo. (Football.London)
Laakiin tababaraha Fulham Claudio Ranieri ayaa bartilmaameedsanaya Cahill lix bilood oo amaah ah si uu xal ugu helo daaficiisa gegada Craven Cottage. (The Sun)
Tababare Emery aya loo sheegay in Arsenal aysan xayiraad abishan saari doonin inay dib ugu yeerto xiddigaha amaahda uga maqan kooxda ee Calum Chambers, 23-jir , iyo Reiss Nelson, 19-jir. (Metro)
Chelsea yaa qarka u saaran inay dhammeystirto heshiiska Xiddiga qadka dhexe ee reer USA Christian Pulisic, 20-jir kaa oo ay 45-milyan kala soo wareegeyso Borussia Dortmund. (Express)
Monaco ayaa shiishka ku heysa inay gaarto heshiis ay Janaayo kula soo saxiixaneyso 31-jirka qadka dhexe kaga ciyaara Chelsea Cesc Fabregas iyadoo uu Thierry Henry eeganayo inuu dib ul amidoobo saaxiibkii hore ee Arsenal. (Daily Mail)
Macalinka Chelsea Maurizio Sarri ayaa sheegay in kooxdu aysan u baahnayn inay keento weeraryahan Cusub bishan Janaayo xitaa haddii dhaawaca canqowga ah ee Olivier Giroud uu caddeynayo khatar badan.(ESPN)
West Ham ayaa qorsheynaysa inay heshiis amaah ah ugu dhaqaaqdo xiddiga qadka dhexe ee Everton James McCarthy, 28-jir maadaama ay eeganayaan inay is xoojiyaan bishan Janaayo. (Daily Mail)
Weeraryahanka Chelsea Tammy Abraham, 21-jir, ma doonayo in dib loogu yeero kooxdiisa waayo wuxuu ku faraxsan yahay kooxda uu amaahda ugu joogo ee Aston Villa, sida uu sheegay Dean Smith. (Sky Sports)
Laakiin Wolves ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa Abraham, kaa oo 16-gool u dhaliyay Villa kal ciyaareedkan. (Daily Mail)
Tottenham ayaa dooneys inay amaah bishan ku dirto xiddiga garabka weerarka ka ciyaara ee George-Kevin Nkoudou, 23-jir. (Footmercato)
Usbuuca soo socda oo la dhammeystiri doono Heshiiska uu Fabregas ugu biirayo......